4.14.20 MCS COVID-19 မိသားစုမွမ်းမံမှု – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားသင်ယူမှု၏ဒုတိယအပြည့်အဝရက်သတ္တပတ်သို့ရွှေ့အဖြစ်, သင်လက်ခံရရှိသည့်ဆက်သွယ်မှုအရေအတွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ညှိနှိုင်းလိုသည်. အင်္ဂါနေ့နှင့်သောကြာနေ့များတွင်ခရိုင်အီးမေးလ်များကိုသင်မှီခိုနိုင်သည်, တနင်္ဂနွေနေ့များနှင့်သင်၏ကျောင်းအုပ်ကြီး e-Newsletter ။
စောင့်ကြည့် ဒီဗီဒီယို Mason ဆိုအလယ်အလတ်ကျောင်း၏, Mason အလယ်တန်းကျောင်းနှင့် Mason အထက်တန်းကျောင်းသံစုံတီးဝိုင်းဆရာများသည်တေးဂီတဆရာများကိုသူတို့၏တင့်တယ်လှပသော One Bow Concerto ဖြင့်ကျောင်းသို့ပြန်လာရန်ကြိုဆိုသည်.
သင်တက်ရောက်နေဆဲဖြစ်သည်? ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးသည်ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်ဝေးလံခေါင်သီသောသင်ယူမှုတာ ၀ န်များကိုမပြီးမြောက်နိုင်ပါကကျောင်းသို့မည်သို့အကြောင်းကြားသင့်သနည်း?
ဆိတ်ကွယ်ရာဤအချိန်ကာလအတွင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်ကျောင်းသား၏သင်ယူမှုနှင့်ကျောင်းသားများကောင်းကျိုးကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်. တောင်မှဤစိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများအောက်မှာ, 99 MCS ကျောင်းသားများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူတို့၏ဝေးလံခေါင်သီသောသင်ယူမှုတာဝန်များနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ပံ့ပိုးမှုပေးချင်တယ်, လမ်းညွှန်, နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ, နေဆဲငါတို့အများအပြားသွားလာနေသောအခြေအနေများ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးနေစဉ်. သင့်ကလေးသို့မဟုတ်မိသားစုနေမကောင်းဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ဝေးလံခေါင်သီသောသင်ယူမှုတာဝန်များကိုမပြီးမြောက်နိုင်ပါက, ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကလေး၏ဆရာကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ(s) နှင့်သင်၏ကျောင်းတက်ရောက်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလက်ထောက်:
MECC (အဆင့် PK-2): Luann Leetch, [email protected]
Mason ဆိုမူလတန်း (အဆင့် 3-4): Brenda haskamp, [email protected]
Mason ဆိုအလယ်အလတ် (အဆင့် 5-6): Brenda haskamp, [email protected]
Mason ဆိုအလယ်တန်းကျောင်း (အဆင့် 7-8): Michelle Lienemann, [email protected]
Mason ဆိုအထက်တန်းကျောင်း (အဆင့် 9-12): Debbie Huff, [email protected]
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိုင်ဖိုင်အစက်အပြောက်ဖြစ်သည်. လူမှုဝေးကွာမှုများကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်အခမဲ့ wifi ကိုရနိုင်သောနေရာများရှိပါသလား?
Mason City ကျောင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ WIFI အခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိနေရာများရှိသည်. ပြင်ပလက်လှမ်းမီသောနေရာများကို ME / MI တွင်ရနိုင်သည် (ဘုရားကျောင်းအနီးဆုံးကားရပ်နားအများကြီး), MHS (Z ကိုခွံ၏ဘေးထွက်အပေါ်ရှေ့ကားရပ်နားအများကြီး, တက်ရောက်သူတံခါးအနီးကပ်), ကြာသပတေးနေ့တွင် MECC Access Point သည်အဆောက်အ ဦး ၏ရှေ့တွင်တည်ရှိသည်။
ဖြည့်စွက်ကာ, ဒီမှာစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် Hot Spot တည်နေရာများ.
ငါစာကိုငါ့မဲတယ်, ဒါပေမယ့်ငါရွေးကောက်ပွဲအမျိုးအစားအဘို့အဘယ်သို့ငါထင်မှမသေချာဘူး, ဖြည့်သည့်အခါရက်စွဲ.
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အထွေထွေညီလာခံသည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်သားများအားလုံးAprilပြီလအထိမဲဖြင့်စာဖြင့်ဆက်လက်မဲပေးခွင့်ပြုမည့်အစီအစဉ်တစ်ခုချမှတ်ခဲ့သည် 28. ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့မှတောင်းခံပြီးနောက်သင်၏ဆန္ဒမဲကိုလက်ခံရရှိသောအခါ, “ ရွေးကောက်ပွဲအမျိုးအစား” မှာအဓိကဖြစ်သည်, သင်သာကိစ္စများရွေးချယ်နိုင်သည်, နိုင်ငံရေးပါတီ (ပြpartyနာများသာနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှမဲများတွင် Mason City ကျောင်းများပြIssueနာရှိသည် 12 သူတို့အပေါ်မှာ), ထိုသို့မတ်လရှိသည်ဖို့ကောင်းပါတယ် 17 ဒါမှမဟုတ်Aprilပြီလ 28 "ရွေးကောက်ပွဲနေ့စွဲ" အဖြစ်။
သင်၏မဲကိုအမှတ်အသားပြုရမည် 4/27 သို့မဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ dropbox မှလက်ဖြင့်အပ် 7:30Aprilပြီလ 28 ရက်နေ့ညနေ, 520 တရားသူကြီးချုပ်, လက်ဘနွန်, အိုး 45036.
ရဲ့အချို့ Mason ဆိုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြန့်နှံ့ကြပါစို့! အနုပညာကျောင်းသားအားလုံးအဆင့်အတန်း, ကျောင်းသားဟောင်းများ, နှင့်မည်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းမဆိုဝီလျံ Mason အထက်တန်းကျောင်းရန်ပွဲသီချင်းဖွင့်ခြင်းတွင် Mason Marching Band တွင်ပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသည်!
ငါတို့အခုအတူတူအားလုံးမလုပ်ဆောင်နိုင်ကတည်းက, သင်၏တူရိယာကိုတီးခတ်ရန်လူတိုင်းကိုဖိတ်ကြားသည် (သင့်ရဲ့အသံ chord အပါအဝင်!) သို့မဟုတ်သင်၏မုတ်ကနေမှတ်တမ်းတင် သောကြာနေ့Aprilပြီ ၁၇ ရက်, မှာ5pm တွင်! ဂီတ၏မိတ္တူ, နှင့်မှတ်တမ်းတင်, မှာရရှိနိုင်ကြသည် www.masonbands.com
သင်၏ Mason စိတ်ဓာတ်ကိုဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုယူပါ MHS Fight Song Challenge Event Facebook စာမျက်နှာ သောကြာနေ့မှာ!